Qorshaha Shaqaalaha | CareerForce
Qorshee guusha xirfadaada ee muddada fog
Waxa muhiimka u ah guusha ganacsigaaga ayaa ah qaabka aad uwaajahdo baahiyaha xirfada shaqada ee mudada dhaw iyo tan fog. Kobcinta xirfada aad haysato adoo kudaraaya farsamoyinka haysashada shaqaalaha oo waxtar leh ayaa qayb muhiim ah ka ah qorshaha xeeladaada, qorshaha shaqaalaha oo faahfaahsan ayaa ah qaab fiican ood arintaas kusuuro galin karto.
Waxaan diyaar unahay inaan kaacaawino abuurista qorshaha shaqaalaha. Xiligaan lagu jiro, halkaan waxaad kahelaysaa macluumaad muhiim ah:
Arag su'aalaha ay tahay inaad kafakarto markaad dajinayso qorshaha shaqaalaha
Dagso xeeladaha haysashada si aad udhawrato shaqaalaha
Tusaalaha Qorshaha Shaqaalaha
Haddii aadan mid haysan, hadda ayaa ah waqtigii aad bilaabi lahayd abuurista qorshahaaga shaqaalaha. Maaha mid adag siday umuuqan karto. Si lagaaga caawiyo bilaabista, akhri arimaha aasaasiga u ah qorshaha shaqaalaha.
Macluumaad dheeri ah akhri